SHEEKO CAJIIB AH: Ninki faqiirka ah ee saca lahaa, taajirki deriska la ahaa ee faraska lahaa iyo qaaligii xikmadda badnaa. | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	SHEEKO CAJIIB AH: Ninki faqiirka ah ee saca lahaa, taajirki deriska la ahaa ee faraska lahaa iyo qaaligii xikmadda badnaa.
Posted on May 14, 2012 by wacyigelin	Beri ayaa waxaa deris ahaa laba nin oo reer Banuu Israaiil ah oo mid faqiir yahay uuna leeyahay sac kan kalena uu yahay taajir leeyahayna faras. Maalinki danbe ayaa ninki faqiirka ahaa siciisi dhalay wayl. Waxaa eedayn la yimid ninki taajirka ahaa oo leh dibigan waxaa dhalay faraskayga. Marki ay doodi dheeraatay ayaa lagu heshiiyay inay ku kala baxaan sharciga.
Waxay isula tageen nin qaali ah si uu ukala saaro. Waxaa dhacday ninki taajirka ahaa inuu siiyay qaaligi laaluush si uu ugu xugmiyo dibiga ninka faqiirka ah. Qaaligi wuxuu yiri waysahan waxaa dhalay farasta ninka taajirka ah marka waa inuu ka tanasulaa ninka faqiirka ah.
Ninki faqiirka ahaa rafcaan ayuu qaatay oo dacwadi u gudbiyay maxkamad kale. Sidi qaaligi hore ayuu ninki taajirka ahaa u laaluushay mar kale. Qaaligi ayaa hadana u xukmiyay ninki taajirka ahaa inay farastiisu dhashay waysgha. Ninki faqiirka ayaa waydiiyay qaaligi sida uu faras u dhali karo dibi. Qaaligi ayaa yiri ma waadan arag indhaha waysha inay u egyihiin indhaha farasta, ma waadan arag lugaha wayshu inay u egyihiin lugaha faraska. Sidaas ayaa loogu xukmiyay ninki taajirka ahaa inuu leeyahay waysha oo ay farastiisu dhashay.
Ninki faqiirka ahaa sidaas kuma joogsan ee wuxuu dacwadiisi u gudbiyay maxkamad taas ka saraysa. Maalinti danbe ayaa maxkamadi ay wada tageen ninki faqiirka ahaa iyo ninki taajirka ahaa. Arinti ayaa loo sharaxay qaaligi dabadeed ninki taajirka ahaa ayaa qaaligi u tegay iskuna deyay inuu laaluusho. Qaaligi ayaa yiri, “anigu ilaahay ayaan ka cabsanayaa kaamana yeelaayo inaad ilaaluushto.”
Dacwadi marki ay furantay ee uu qaaligi dhegaystay ayuu sheegay in uu maxkamadda xirayo maantay maadaama uu dhiigi caadada uu ku dhacay isla saacadaas. Ninki taajirka ahaa ayaa arintaas aad ula yaabay asagoo qaaligi usheegay inaanay macquul ahayn waxa uu sheegay oo aan ragga caado ku dhicin.
Ninki qaaliga ahaa ayaa ninki taajirka ahaa ku yiri sideed ku diidi kartaa in dhiig igu dhacay hadiiba aad kudoodaysid in uu faras wayl dhalay. Sidaas ayaa ninki faqiirka ahaa loogu xukmiyay wayshiisi dacwadina looga raayay ninki taajirka ahaa.
Filed under: Uncategorized « An Islamic History of Europe WITH ARABIC SUBTITLES الشريعة والحياة – الحرية ومقاومة الاستبداد »